FLV hawadda: Sida loo cadaadi FLV Files Fast
Hel qaar la yaab leh FLV videos, laakiinse iyagu innaba ma lifaaqi kartaa in email si ay ula wadaagaan saaxiibbo? Ama aad rabto inaad geliyaan qaar ka mid ah videos FLV on online laakiin waxa ay qaadataa saacadood in la sii wado? Waxaad aadan keligaa. Digital videos inta badan waa mid aad u weyn oo loogu talagalay nidaamka badan email. Iyo uploading badan oo online file FLV waqti aad u dheer in la sii wado haddii aadan ku leedahay xiriir xawaare sare ku qaadataa. Sidaa darteed, hoos u size file FLV waa barta ugu muhiimsan haddii aad rabto inaad la wadaagto videos FLV. In this article, waxaad ku baran doonaa sida loo yareeyo xajmiga video iyadoo tayada asalka isticmaalaya Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Halkan waxa aad ka tagaan.
Hawadda FLV Best for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Si fudud cadaadisaa FLV video aan khasaaro tayada wax.
Dheellitir goobaha video sida bitrate, xallinta, heerka jir iyo ka badan oo ku qasabno ah.
Ma qaar ka mid ah video tafatirka ee aasaasiga ah sida dalagga, darsamaan, isku shaandheyn iyo kala gudahood barnaamijka.
Dhamee habka comprssion ee ah secondes yar.
1. Import FLV files in this hawadda FLV
Riix ah "Add Files" button ama si toos ah jiidi jeedi FLV video galay uu furmo suuqa hoose. Marka aad ku darto oo dhan oo iyaga ka mid, waxay u muuqataa doonaa sida thumbnails in saxaarad shayga. Haddii loo baahdo, waxaad riixi kartaa "Edit" button in jar, dalagga, isku shaandheyn, dalban saameyn muuqaal aad video.
2. cadaadi FLV videos ku qasabno yar
Markaas riix qaab image dooro "Qaabka"> "Web"> "FLV" ka format saarka suuqa kala pop-up ah. Ka dib markii aad doorato qaab wax soo saarka, guji "Settings" button on koonaha midig ee suuqa. Daaqadda goobaha muuqata, hubi "Size Small" doorasho. Ka dib markii in, ku dhacay "OK" si loo xaqiijiyo goobaha aad iyo laabto uu furmo suuqa ugu weyn.
Talooyin: Waxaad sidoo kale isku dubaridi kara koobin ee video iyo maqal ah labada iskaa si loo gaaro riixo dheeraad ah. Daaqadda goobaha, Encoder, Resolution, Rate jir ah, Rate Inyar, iwm oo dhan waa xor ah hagaajin karo. Si aan ku bilaabo, riix arrow hoos-hoos si loo doorto ikhtiyaarka sida baahidaada. Waxaa ay mudantahay in la xuso in qiimaha beegyada uu hoos u abuuri doonaa size file yar, laakiin waxa ay sidoo kale xaqiro doonaa tayada video ah. Sidaas daraadeed waxaad u baahan tahay inaad tanaasul ah oo ku saabsan.
3. Start ku cadaadisaa files FLV
Hadda waxaad eegi kartaa qiyaasay baaxadda wax soo saarka iyo is-barbar file asalka. Waxaad sidoo kale riixi kartaa icon Play inay dib u eegaan saamaynta file wax soo saarka. Markii wax walba oo ku qanacsan, kaliya ka dhacay Beddelaan si aad u bilowdo riixo FLV. Ka dib markii riixo file dhamaystiran, waxaad si habsami geliyaan kartaa internetka ama ka mid ahaa waxaa ka jira email saaxiibada la wadaaga. Hambalyo!
Video tutorial: Sida loo cadaadin FLV video files
Sida loo jar Videos on VLC?
Shawladda Audio: Sida loo Waraaqda Audio ka Video
> Resource > Video > FLV hawadda: Sida loo cadaadi FLV Files Fast